ဗန်းစကား ကျွမ်းသလား (၁) - Myanmar Network
ဗန်းစကား ကျွမ်းသလား (၁)
Posted by Tin Nyunt on September 3, 2011 at 9:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တစ်ခုခုဟာ အံ့သြစရာကောင်းရင် “Awesome” လို့ပြောကြတယ်။ Liverpool မှာတော့ “Ace” လို့ အသုံးများတယ်။ Ace ကိုတစ်ခါတစ်လေ Brill ဆိုပြီးတော့လည်း သုံးကြတယ်။
Kid thought all cool stuff was ace.
Kid thought all cool stuff was brill.
“Aggravation” ရဲ့ အတိုကောက်စာလုံးအဖြစ် သုံးကြတယ်။ အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ သုံးတာ။ ဥပမာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ကောင်းတုန်း မီးပျက်တာမျိုး။ “Trouble” ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သုံးကြတာ။ သူတို့ဆီမှာ တော့ အရက်ဆိုင်တွေပိတ်လို့ ဒုက္ခရောက်တာကို ဒီလိုပြောတယ်။
There is sometimes aggro in the cities after pubs shut!
3. All right?
လန်ဒန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ တောင်ပိုင်းမှာ အသုံးများတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က “Hello, how are you?” ဆိုတာနဲ့ အတူတူပဲ။ လုံးဝမသိတဲ့ သူစိမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ကသိတဲ့သူကိုတွေ့ချိန်မှာ နှုတ်ဆက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို နှုတ်ဆက်လိုက်ရင် တဖက်က “All right?” လို့ပြန်ပြောလိမ့်မယ်။ မသိလို့ သူကပြန်ပြီး ငါ့ကိုသိလို့လားဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးခွန်းပြန်ထုတ်တာ။ အဲဒါကိုပဲ နည်းနည်းလေးချဲ့ပြီး တချို့က “All right mate?” လို့ပြောတတ် သေးတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီအသုံးကို blue collar လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေနဲ့ လူငယ်တွေပဲ အသုံးများကြတယ်။
နာရီဆိုတာ လက်ယာရစ် လှည့်တာ။ ပြောင်းပြန် လက်ဝဲရစ်ပြန်လှည့်ရင် အစဉ်အလာအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒါကို counter-clockwise လို့လည်းပြောသေးတယ်။ ဒီလိုသုံးလိုက်တာကို လည်း ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားမှာ ကြားလိုက်ပါသေးတယ်။
I think he thought I had something against clocks!
မြောက်ပိုင်းမှာ အသုံးများတယ်။ “Anyway” အစားသုံးကြတာ။
Instead of saying anyway, they say any road! Weird huh?
အမေရိကန်မှာ မသုံးကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “Ass” ဆိုတာနဲ့ အတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီး ရိုင်းပြတဲ့အနေနဲ့ သုံးကြတာ။ Arse ကို သူ့ချည်းပဲ မသုံးဘူး။ တွဲလုံးအနေနဲ့ သုံးကြတယ်။ ဥပမာ စိတ်ထဲမှာ အသိကအောင့်ဖြစ်နေရင်၊ မနှစ်မြို့ရင် “pain in the arse” လို့ပြောတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် “I can’t be arsed” လို့လည်း ပြောကြတယ်။ “A half arsed attempt” လို့ပြောရင် ပြီးအောင်မလုပ် လို့ စိတ်ပျက်ပြီးပြောတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။
7. Arse about face
တစ်ခုခုကို ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်သုံးတယ်။ Back to front နဲ့ အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲ။
8. Arse over elbow
Head over heels နဲ့ အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲ။ အရူးအမူးလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ သူကတော့ ပိုပြီးတော့ လက်တွေ့ဆန်တယ်။ စနေနေ့ည ၁၁ နာရီကျော်ရင် အမေရိကန်တွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ စိတ်ရူးပေါက်မှုမျိုးကို ပြောတာထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေကတော့ အဲဒါကို “ass over teakettle” လို့ပြောကြတယ်။ နောက် တစ်မျိုး အနေနဲ့ “arse over tit” လို့လည်းသုံးကြသေးတယ်။ ပိုပြီးတော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တဲ့သဘောနဲ့ သုံးတာပါ။
လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်မူးနေတာကိုပြောတာ။ ဒါကို “completely arseholed” လို့လည်းသုံးတယ်။
Asshole ကိုပြောတာပါ။ မကောင်းတဲ့စာလုံးဖြစ်နေလို့ မသုံးစေ့ချင်ဘူး။ ရိုင်းပါတယ်။
Permalink Reply by zaw phyo naing on September 4, 2011 at 23:02
I am looking forward to seeing your coming posts.
Permalink Reply by 1z32bac4b8r2j on September 12, 2011 at 9:33
Permalink Reply by 2t3cejvvpeemz on September 12, 2011 at 14:35
Permalink Reply by laypyayslight on September 12, 2011 at 14:44
nice post thz~~
Permalink Reply by sandy on September 13, 2011 at 17:03
Permalink Reply by ZAR YEE MON on September 20, 2011 at 13:02
Thanksalot your message.
Permalink Reply by 3n8vaqeuqzomz on September 21, 2011 at 13:39
Permalink Reply by moe say~ on September 21, 2011 at 13:50
Ace post~~ xD
Permalink Reply by Queen on September 21, 2011 at 15:08
Many Thanks naw :)
Permalink Reply by 1snserf2x2bn8 on September 27, 2011 at 1:33
Permalink Reply by Diamond on September 30, 2011 at 6:31
Thanksalot. I like this post .
Permalink Reply by Ratan Biswas on October 2, 2011 at 19:41